SHirkii golaha wasiirada iyo waxyaabihii lagaga hadley oo dhameystiran. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada SHirkii golaha wasiirada iyo waxyaabihii lagaga hadley oo dhameystiran.
Khamiis, November 19, 2015 (HOL) — Golaha Wasiirrada Xukuumadda Soomaaliya ayaa kulankoodii maanta waxay isku raaceen in dib loo furo safaaradihii Soomaaliya ee la xiray bishii Luuliyo ee sannadkii 2014-kii, go’aankaasoo ay golaha wasiirrada Somalia ay horay u go’aamiyeen in la xiro.
Dhanka kale, golaha wasiirrada xukuumadda Somalia ayaa dood dheer kaddib isku raacay in dib loo furo safaaradihii Somalia ee horey loo xiray, iyadoo goluhu xusay in safaaradaha xiran baahi weyn ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed ee dalalkaas ku nool.
Previous articleGolaha xukuumada soomaaliya oo warbixin ka dhegeystey gudigii loo direy in ay soo ogaadaan xadgudubka la sheegey in kenya ka wado xuduuda labada dal.
Next articleMaxkamadda denbiyda dagaalka ICC oo caqbado soo food saareen.